Izindawo Eziphezulu Eziyi-10 Zomhlaba Wonke Zekhasino - Amakhodi Ebhonasi Yekhasino aku-inthanethi
Izindawo ze-Casino eziphezulu ze-10 emhlabeni wonke
(601 amavoti, isilinganiso: 4.99 out of 5)
Iyalayisha ... Imbonini ye-casino e-intanethi isibe yimbutho yangempela yezwe, ifinyelela emingceleni yamazwe amaningi emhlabeni wonke. Imingcele kuphela ehlonishwa imboni yiyo echazwe yimithetho nemithethonqubo eyenziwe yizizwe ezizimele ezihlukene. Ngokwesibonelo, amazwe ase-Muslim awavumeli ukugembula. Ngakho-ke, amakhasino ase-intanethi akakwazi ukuhlinzeka ngezinsizakalo zawo kubahlali bezo zizwe.
Ukugembula Komhlaba Wonke
Imithetho ejwayelekile yokugembula iyahluka emazweni ahlukahlukene. Amazwe eYurophu kucatshangwa ukuthi anezimo zengqondo ezikhulula kakhulu ngokubheja. Izakhamizi zase-UK zikwazi ukufinyelela ukubheja kwezemidlalo, umjaho wamahhashi, ama-lottery nezitini nodaka lwamatshe. E-Asia, imboni yokugembula isesencane, kodwa izinguquko bezilokhu ziqhubeka. Eminyakeni emihlanu eyedlule, iMacau (China) isibe yindawo enamandla kagesi embonini yokugembula, yathatha indawo yeLas Vegas njengomhlinzeki omkhulu wemidlalo yamakhasino ngokusetshenziselwa imali yonyaka. IJapan nePhilippines nabo batshala imali embonini yamakhasino. Kwezinye izindawo ezinjenge-Australia, ukugembula kwamukelwa njengendlela yokuzijabulisa yabantu abadala, kepha imithetho nemikhawulo ivame ukuba nzima.
ENyakatho Melika, eCanada nase-United States banemithetho yokugembula eyehluke kakhulu. Ukugembula kweCasino eCanada akukho emthethweni. Kodwa-ke, iZizwe zamaNdiya ezinjengeKahnawake zithathwa njengohulumeni abazimele futhi bavunyelwe ukuzenzela eyabo imithetho. Ngakho-ke, kusemthethweni ukugembula ezweni lamaNdiya. E-United States, uHulumeni Wombuso ukwenze kwaba ngokungemthetho ukugembula. Noma kunjalo, izifundazwe zivunyelwe ukuzenzela eyazo imithetho. Ngakho-ke, iNevada neNew Jersey baphasise umthetho ovumela ukugembula kwekhasino. Ezinye izifundazwe zisebenzise "izikhala" ezifana nokubhuka kwamaNdiya nezindawo zemifula ezisogwini lolwandle ukuze zinikeze izakhamizi zayo ukugembula kwekhasino ngaphandle kokuya kusishayamthetho sombuso.
Uhlu lwezindawo ze-Casino eziphezulu ze-10 emhlabeni wonke we-Casino Sites
ISIKHATHI SOKUSEBENZA KWEZIKHASI ZEZIKHATHI ZONKE
Ngenxa yemikhawulo eminingi nemithethonqubo maqondana nokugembula online emhlabeni wonke, isinyathelo sakho sokuqala lapho unquma ukuthi iyiphi ikhasino yamazwe omhlaba ongayikhetha iqinisekisa ukuthi awwephuli imithetho. Kunezinkulungwane eziningi ze- ama-casino amakhulu e-intanethi emhlabeni wonke futhi ngokuvamile ukuphepha kwakho nokuphepheka okuhle kakhulu.
Abadlali abavela emazweni ahlukene bayothola i-casino ethile enkulu ye-inthanethi engakwazi ukuhlangabezana nezidingo zabo. Ngokwesibonelo, sincoma ukuthi abadlali baseNingizimu Melika basebenzise I-Casino Fantasia noma cishe noma yiliphi lekhwalithi ephezulu kakhulu yama-intanethi e-intanethi enikwe amandla I-Microgaming.
Mhlawumbe amakhasino kaMicrogaming noma amaCasino Fantasia awakuthandi noma awahlangabezani nezidingo zakho? Kufanele ubheke amakhasino amaningi asungulwe kahle axhaswe yi- Ukudlala kwe-Realtime. Kuhlu lwethu lwezikhungo ezibukeziwe nezilinganisiwe, sithinta kuphela amakhasino aphezulu e-inthanethi emhlabeni jikelele abamukela abadlali emhlabeni jikelele.
Ngokuqinisekile esinye isici okufanele usicabangele lapho ukhetha i-casino e-intanethi kungakhathaliseki ukuthi banezinkinobho ze-casino ofuna ukuyidlala noma cha. Kusuka ematheni okuqala kuya kuma-jackpots athuthukayo, kusukela ekuqaleni kwezemidlalo ukuhlala imidlalo yethebula, qiniseka ukuthi i-casino ye-intanethi oyikhethayo yikho okudingayo.
Ungakhohliswa ngamakhasino aku-inthanethi abonakala enikela ngomhlaba kepha eletha okuncane kakhulu. Amakhasino aku-inthanethi aphesheya esiwabukezile aletha okuhle kakhulu kumageyimu wekhasino, ukukhushulwa, ukusekelwa nokunye okuningi.
Esinye isici okufanele sicabange ukuthi ngabe i-casino e-intanethi onayo iso lakho inikezela ngamasevisi ayo ngolimi oluthandayo. Ama-casino amaningi angamazwe angaphandle ahlinzeka ngezilimi ezahlukahlukene futhi akwazi ukukusiza nganoma iziphi izikhalazo noma izinkinga okungenzeka ube nazo ngolimi olukhululekile ukusebenzisa. Ukuzizwa ukhululekile futhi ukhululekile ngokuzivocavoca kwakho kubalulekile ngakho ungaphoqeleka ukuthi uzizwe udidekile. Khetha ikhasino engakunikeza konke okudingayo.
Ekugcineni, qiniseka ukuthi ukuthengiselana kwemali kuphephile kunoma iyiphi ikhasino lapho uhlose ukusebenzisa khona (futhi ngethemba lokuthi uzowina) imali. Kubalulekile ukuthi izivumelwano zokuphepha ezitholwe yikhasino eku-inthanethi odlala kuzo zihamba phambili kakhulu ukuze ungalokothi ukhathazeke ngemali yakho, kepha esikhundleni salokho ungadlala futhi ujabule!
UKUPHILA KWAMAKHAYA AMAKHAYA:
Izindaba ezinhle ukuthi kungakhathaliseki ukuthi iyiphi inthanethi Umdlalo wekhasino uzimisele ukudlala cishe itholakale kunoma iyiphi i-casino yamazwe omhlaba oyikhethayo. Namuhla ungakhetha ukudlala kunoma iyiphi idivayisi kufaka phakathi ideskithophu namakhompyutha wekhompyutha, amaphilisi, i-TV, amafoni omakhalekhukhwini, ngisho nokubuka kwe-apple. Ngakho-ke uma udinga ukujabulela ezinye imidlalo ekuhambeni kungani ungazami Imidlalo yekhasino yeselula?
Uma ufuna ukuzama inhlanhla yakho lapho uvula izinsimbi ze-classic, 3D or Slot okuqhubekayo bese uqala ukudlala! Ngezihloko ezihlukahlukene, ama-jackpots nezitayela ezitholakalayo, Izintambo eziku-intanethi kuyindlela enhle yokuba mkhulu kunanqola futhi ube nenetha elihle lapho wenza kanjalo.
Ithebula lethebula, kungakhathaliseki ukuthi ukhetha ukudlala ngokwakho noma kuthebula elibukhoma nabanye abadlali, kuyindlela enhle yokuhlola ikhono lakho nenhlanhla. Imidlalo yethebula njenge blackjack, roulette, i-poker noma I-baccarat konke kutholakala ngokuchofoza kwenkinobho.
Kuye ezweni lakho lokuhlala, imidlalo engavamile ekhona ingase ihluke kancane. Imidlalo engavamile njengokunye Ibhayisikili, Qala amakhadi, imidlalo yamadayisi nokuningi kuyindlela esheshayo nejabulisayo yokwenza imali encane eyengeziwe. Ungakhohliswa isihloko sabo 'esijwayelekile', le midlalo ingashintsha impilo yakho!
Siyabonga ukuthi amagama amaningi kakhulu kumidlalo ye-casino e-intanethi athuthukisa imidlalo yabadlali bamazwe ngamazwe futhi lokho kusho ukuthi ngeke neze uphelelwe emidlalweni engcono, yekhwalithi ephezulu. Ungalokothi uhlale kancane uma ungadlala kakhulu kakhulu.
Ngingadlala yini kunoma ubani emhlabeni?
Ngenxa yeziphathimandla eziqinile kakhulu ngokuphathelene nokugembula kwe-intanethi, amazwe amaningi anomkhawulo kakhulu noma awukho ukufinyelela kuma-casino e-intanethi. Ngenkathi ama-casinasi sincoma ukuthi sinemikhawulo engaphansi kwezwe, kungase kube nzima kuwe ukudlala kwi-casino e-intanethi, ngisho namakhasino ase-intanethi emhlabeni jikelele, kuye ngokuthi izwe lakho lendawo yokuhlala.
Eqinisweni kunamazwe amaningi, njenge-Asia ne-Israel lapho amakhasino aku-inthanethi enqatshelwe khona futhi ama-ISP evimba ukugembula okuku-inthanethi ngokuphelele. Ngokujabulisayo, imithetho yokugembula eku-inthanethi iyashintsha ngaso sonke isikhathi futhi lokho kusho ukuthi unethuba elihle kakhulu lokukwazi ukudlala kulawa makhasino aku-inthanethi! Ngaso sonke isikhathi qiniseka ukuthi uyazi imithetho ethize ephathelene nokuthi uhlala kuphi nokuthi awwephuli umthetho.
Ingabe unayo iziphakamiso, amazwana noma izicelo eziphathelene namakhasino angamazwe angaphandle? Xhumana nathi manje bese wabelana ngemicabango yakho.
Izinhlobo ze-Casino Imidlalo Ye-Inthanethi
Amakhasino aku-inthanethi anamandla okunikela ngesamba esikhulu semidlalo eyahlukene yekhasino. Ingabe ukhetha izikhala? I-Blackjack? I-Roulette? I-USA-Casino-Online.com inikeza imihlahlandlela yokuthi ungayidlala kanjani imidlalo oyikhonzile yekhasino. Jabulela ukugembula kwakho ku-inthanethi ngokwengeziwe? Khetha eyodwa yemidlalo ongayazi! Kulula kakhulu ukuzifunda, futhi uzokwazi ukudlala kamnandi ngemali yangempela ngaphandle kwanoma yisiphi isikhathi!
Amabhonasi ama-Best Casino
I-USA-Casino-Online.com incoma ukuthi ufunde njalo izimo zebhonasi ngayinye ehlinzekwa yi-casino e-intanethi oyifunayo ukuyidlala. Akuwona wonke amabhonasi adalwe alinganayo, futhi amanye angadinga ukuthi uhlangabezane nezikhwama ezihamba phambili ngaphambi kokuba ibhonasi ikhishwe. Amabhonasi ama-casino e-intanethi angcono kakhulu yiwo akunika amabhonasi wokubhalisa, okwenza idiphozi, nokuba ngumdlali oqotho ekhasino yabo.
Njengebhonasi eyengeziwe, i-USA-Casino-Online.com isebenza kanzima ukuxoxisana ngamabhonasi amahle kakhulu avela kumakhasino aku-inthanethi amahle kakhulu. Ngemuva kwalokho sidlulisa lawa mabhonasi akhethekile kubasebenzisi bethu. Zingcono kakhulu kunokunikezwa okujwayelekile kwekhasino! Ukuthola eminye imininingwane ngamabhonasi amanje ahlinzekwa ngamanye amakhasino ethu anconyiwe, sicela usebenzise iwebhusayithi yethu ukuthola okufana nezintshisekelo zakho. Ungase futhi ulandele isigaba sethu sezindaba ukuze uhlale usesikhathini nakho konke ukunikezwa kwamanje. Awufuni ukuphuthelwa la mathuba abalulekile wokufaka imali!
Ingabe ukhetha ukudlala imidlalo ye-casino efonini yakho?
I-USA-Casino-Online.com ingakubonisa amakhasino anika umdlalo weselula! Ungadlala imidlalo engcono kakhulu kusuka kuyo yonke indawo oyithandayo. Wonke amakhasino ku-website yethu ahambisana namadivayisi eselula futhi anikeze isipiliyoni semidlalo eselula kunazo zonke!
Ingabe ukhetha ukudlala imidlalo ye-casino ngaphandle kokulanda noma iyiphi isofthiwe?
I-USA-Casino-Online.com inezincomo eziningi zamasayithi ekhasino aku-Flash nesiphequluli asuselwa ku-inthanethi angadingi kulandwa nakancane! Qala zisuka nje ngokuchofoza inkinobho ethi “Instant play”. Akunasidingo sokufaka noma yini!
Ingabe ukhathazeka ngokuthi i-casino software e-intanethi ingaba ingaphephile?
Siyaniqinisekisa ukuthi wonke amakhasinasi esiwacomayo yi-100% ephephile futhi angeke akhohlise ukuphepha kwakho!
Izindlela ezidumile zokukhokha kwe-Canadian
Abasebenzisi base-USA-Casino-Online.com basitshele ukuthi bakhathazekile ngokuthola izindlela zokukhokha ezithembekile zaseCanada. Wonke amakhasino ethu anconywayo anikela ngezindlela zokukhokha ezilula, okusheshayo nezokuphepha. Lezi zihlanganisa amakhadi esikweletu, i-PayPal, eCheques, ngisho nokudluliselwa kwebhange ngokuqondile.
Ama-casino e-intanethi adweliswe emsebenzini wethu wewebhusayithi nabahlinzeki bokukhokha bangaphandle. Laba bahlinzeki bokukhokha bazinkampani eziphephile futhi eziziwayo (ezibhalwe). Bazocubungula zonke izinkokhelo nokuhoxiswa ngokuphepha kwe-100% (ukubethelwa kwedatha enzima). Ezimweni eziningi igama lekampani lokugembula le-inthanethi ngeke liboniswe ebhange lakho.
Inombolo enkulu kakhulu Ama-casino e-intanethi, ukuhlinzeka ngezinsizakalo zayo ku-Namuhla, kuphakamisa inkinga yokukhetha indawo enhle yabalandeli bezokugembula futhi ungachitha izinsuku namaviki, ubeka ingozi yakho siqu, uze uthole ikasino eyokuvumelanisa ngokuphelele. Ngakolunye uhlangothi, ukugcina isikhathi nemali kungaba lula uma ubuyela kithi Ama-casino best online ingxenye. Ngaphambi kokukhetha ikhasino eku-inthanethi, funda ukubuyekezwa okulandelayo bese ucabanga ngohlu lwamakhasino aku-inthanethi anconyiwe anikezwe kulawa makhasi esiqondisi samakhasino aku-inthanethi. Uhlu nalawa makhasi wokubuyekeza azosebenza njengomhlahlandlela wakho emhlabeni wekhasino. Lokhu kukhethwa kwamakhasino aku-inthanethi kufaka amakhasino aku-inthanethi athenjiwe futhi anedumela elihle. Izici ezikhethekile ekhasini zizokuqondisa ezinhlwini ezingeziwe: amakhasino aku-inthanethi ngeSpanishi, isiJalimane, isiFulentshi nezinye izilimi; amakhasino aku-inthanethi aku-inthanethi nezinye izimali; Amakhasino aku-inthanethi akwaNeteller nezinye izindlela zokukhokha; nezinye izindlela ezizokusiza uhlanganise futhi uqondanise umkhiqizo wakho wephupho.
Ekugcineni, qiniseka ukuthi ikhasino inendlela yokuphikisana ekhona. Lokhu kubaluleke kakhulu uma kuke kwaba nenkinga phakathi kwakho nekhasino. I-eCOGRA nabanye abalamuli bayohlala benophawu lwabo kumakhasino avunyiwe, ngakho-ke okudingekayo yimizuzu nje embalwa kuwebhusayithi ukusho uma kukhona inketho yokuphikisana. Abadlali base-United States bazofuna ukukhuthala ngokukhethekile lapho becwaninga ukubuyekezwa kwamakhasino aku-inthanethi ngenxa yokuthi balawulwa ngaphandle kwegunya lase-US. Ngalokho kusho ukuthi kunamakhasino amaningi ase-US anobudlelwano obude nabadlali base-US. Kunamakhasino aku-inthanethi amaningi amahle kakhulu; udinga nje ukwazi ukuthi yiziphi. Ngezansi kunezibuyekezo ezigcwele, izilinganiso zamakhasino aku-inthanethi kanye nemininingwane yebhonasi yamakhasino aku-inthanethi abuyekeziwe futhi avunyelwe. Lolu hlu lwamakhasino aku-inthanethi lubuyekezwa njalo.
1 Ukugembula Komhlaba Wonke
2 Uhlu lwezindawo ze-Casino eziphezulu ze-10 emhlabeni wonke we-Casino Sites
3 ISIKHATHI SOKUSEBENZA KWEZIKHASI ZEZIKHATHI ZONKE
4 UKUPHILA KWAMAKHAYA AMAKHAYA:
5 Ngingadlala yini kunoma ubani emhlabeni?
6 Izinhlobo ze-Casino Imidlalo Ye-Inthanethi
7 Amabhonasi ama-Best Casino
8 I-Casino Software
9 Izindlela ezidumile zokukhokha kwe-Canadian
akukho idiphozi ibhonasi Slots lv